Maamulka Magaalada Mombasa Oo Adkeynaya Amaanka Magaaladaasi | Saadaal Media
Maamulka Magaalada Mombasa Oo Adkeynaya Amaanka Magaaladaasi
Feb 14, 2019 - jawaab
Saraakiisha amaanka ee magaalooyinka Mombasa iyo Kwale ee woqooyi bari dalka Kenya ayaa sheegay in ay howgalin doonaan dagaalyahano horay uga soo goostay Al-shabaab si ay uga hortagaan weerarada magaalooyinkaasi ka dhaca.
Taliyaha booliiska magaalad Mombasa Evans Achoki ayaa tilmaamay in ciidamada ay tababareen ay hogaamin doonaan howlgalada ka dhanka ah la Al-shabaab ee ka bilaaban doona magaalooyinka Kwale iyo Mombasa.
Todobaadkii la soo dhaafay maamulka magaala xeebeedka Mombasa ayaa sheegay in ciidamadaasi ay si hoose ula shaqeyn doonaan laamaha amaanka ,si ay uga caawiyaan ka hortaga weerarada ay soo maleegaan Al-shabaab.
Mr Achoki ayaa sheegay in ololahaasi lagu xaqiijinayo amaaanka magaalooyinka Mombasa iyo Kwale ay bilaaban doono 26-ka bishan.
Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Jabuuti oo maanta kulan aan caadi ahayn yeelanaya
Madaxweynaha Dowladdaha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa maanta lagu wadaa in ay kulan ku yeesheen ...
DAAWO:-Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Degmada Baardheere ayaa Al-Shabaab kala wareegay saldhiyo
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Degmada Baardheere ayaa Al-Shabaab kala wareegay saldhiyo ...
DAAWO:-Wasaarada Amniga Jubbaland oo sheegtay in lagu been abuurtay